Vono olona : Vehivavy bevohoka maty novonoin’ny sipam-badiny, ankizy 15 taona - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversVono olona : Vehivavy bevohoka maty novonoin’ny sipam-badiny, ankizy 15 taona
Vono olona : Vehivavy bevohoka maty novonoin’ny sipam-badiny, ankizy 15 taona
« Noho ny fifankatiavana nisy teo amin’izy roa tonta no nahavitan’ilay zazavavy nikasi-tanana ity farany noho ny hasarotam-piaro teo aminy », hoy ny fampitam-baovao. Tranga niseho tao an-drenivohitr’i Menabe tao.
Niainga tamin’ny fitarainana azon’ny pôlisy avy ao amin’ny Fitaleavam-paritry ny filaminam-bahoaka tao Menabe ny raharaha. Tovolahy iray 22 taona no voalaza fa nanodinkodina ankizivavy tsy ampy taona ary nalainy vady mihitsy taty aoriana. Tao anatin’izany rehetra izany anefa dia nifangaro tamin’ny resaka vono olona ihany koa ny raharaha. Satria ity sipakely nalain-dranamana ity dia voarohirohy tamin’ny resaka vono sy daroka nitarika ny fahafatesam-badiny. Eny, efa nanambady ingahy talohan’ny nisariany zoro tamin-drazavavikely …
Rehefa nisy ny fanadihadiana sy ny fikaroham-baovao nataon’ireo tompon’andraikitry ny pôlisy misahana ny zaza tsy ampy taona tamin’ilay tranga fanodinkodinana zaza aloha dia voamarina tokoa ny zava-nisy ary nosamborina ilay tovolahy. Voalaza tamin’izany fa efa roa taona teo ho eo izy ireo no niaraka, fony ity zazavavy ity vao 13 taona monja. Ankehitriny moa izany « vadiny » izany dia efa 15 taona. Niaiky tsara ranamana fa niaraka tamin’io zazavavy io. Ankoatra ny fanodinkodinana zaza tsy ampy taona izay anisan’ny vesatra hanenjehana azy dia fantatra fa nampirisika ity zazavavy ity hanala zaza ihany koa ny tenany rehefa bevohokany tao anatin’izay fotoana izay ikala. Kanefa mbola voararàn’ny lalàna aloha hatreto ny fanalàna zaza, izay sokajiana ho vono olona.
Tetsy andanin’izay, rehefa niroso hatrany ny famotorana lalina nataon’ireo tompon’andraikitry ny filaminana dia tsikaritra fa tsy dia mazava loatra sy mampiahiahy ilay zazavavy niaraka tamin-drangahy. Fantatra mantsy fa efa nanambady ity farany, talohan’ny niarahan’izy ireo ary nitondra vohoka io ramatoa io. Saingy namoy ny ainy tamin’ny fomba tsy dia nazava loatra ity farany. Tsy maintsy nalaina am-bavany araka izany ramatoakely, ka niboraka teo ny nafenina. Noho ny hasarotam-piarony loatra manoloana ity vadin’ingahy sakaizany ity dia novonoina tamin’ny alalan’ny daroka ilay ramatoa bevohoka. Ratra izay nitondra izany vehivavy izany tany amin’ny fahafatesana.
Ny sabotsy teo moa izy roa ireto no voasambotra ary efa samy nampandalovina teo anatrehan’ny Fampanoavana avokoa. Mazava ho azy, nahitsy ny fanapahan-kevitr’ireo mpitsara nandritra izany : samy nahiditra am-ponja avokoa izy roa !